Sintomy Posky Boeing 757-200 V1 Demonstrator FS2004
Posky Boeing 757-200 V1 Mpanao fihetsiketsehana FS2004 HOT
Complete Boeing 757-200 nanao ny avo lenta ho an'ny FS2004 dikan Mpanao fihetsiketsehana, tonga lafatra noho ny mandray anjara amin'ny fihaonana sy rivotra mampiseho. Ny feo dia miavaka volen'ny avy amin'ny tena B757. Ny mpitsara sy ny virtoaly 2D cockpit dia tanteraka asany, maro ny bibikely no raikitra ao amin'ny gauges sy textures.
Ny Boeing 757 fiaramanidina dia antonony ny fipetrany izay naka ny rivotra sambany Febroary 19, 1982. Izany dia natao hisolo ny 727. Toy ny ankamaroan'ny fiaramanidina Boeing, dia roa Pratt & Whitney PW2043 na Rolls Royce RB211-535E4B.
Ny famokarana fiaramanidina io tapitra Novambra 28, 2005, farany fiaramanidina efa natolotra an'i Shanghai Airlines.